Sidee Sabuurrada iyo Nebiyadu wax u sii sheegeen Isa al Masih? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
The Taurat nabi Muuse NNKH ayaa soo dajiyay aqoontii hore ee Isa al Masih NNKH iyada oo loo marayo calaamado u ekaa imaatinka nebiga. Nebiyadii raacay Muuse waxay tuseen qorshaha Eebbe iyagoo hadallo leh. Daawuud NNKH, oo Eebbe u waxyooday, marka hore wuxuu sii sheegay soo socda ‘Masih’ ee Sabuurka 2 qiyaastii 1000 BC. Dabadeed Sabuurradii 22aad wuxuu ku qoray hadal hadal ku saabsan qof kaas gacmo iyo cagaha waa ‘lagu wareemay’ jirdilka, ka dibna ‘la dhigay boodhka dhimashada’ laakiin ka dib ayaa la gaaray guul weyn oo saameyn doonta dhammaan ‘qoysaska dhulka’. Tani ma waxay ahayd wax sii sheegidda iskutallaabta soo socda iyo sarakicidda Isa al Masih? Waxaan eegaynaa halkan, oo ay ku jiraan waxa ay Suuratu Saba (Suuradda 34) iyo Suuradda An-Naml (Suuradda 27) ay nooga warramayaan sida Eebbe ugu waxyooday Daawuud Zabuur (Sabuurradii 22).
Wax sii sheegidda Sabuurrada 22
Waxaad akhrin kartaa halkan Sabuurka 22 oo dhan. Hoos waxaa ku yaal miis ay ku qoran tahay Sabuurrada 22 oo dhinac dhinac ah oo ay ku qoran tahay sharraxaadda iskutallaabta lagu qodbay Isa al Masih sida ay xertiisii ​​(saaxiibadii) uga markhaati kaceen Injiil. Qoraallada midabkoodu waa isku mid si fudud ayaa loo xusaa.
Faahfaahinta iskutallaabta ee Injiil Sabuurradii 22 – oo la qoray 1000 BC
Injiilku wuxuu ka qoray aragtida goob-joogayaashii daawanayay iskutallaabta. Laakiin Sabuurrada 22 waxa laga qoray dhinaca qof la kulma. Sidee loo macneeyaa isku ekaanshaha u dhexeeya Sabuurrada 22 iyo iskutallaabta lagu qodbay Isa al Masih? Ma waxay ku dhacday in tafaasiisha ay isla jaanqaadaan sida saxda ah ee ay ku jirto in dharka labadaba la kala qaybiyo (dhar tol ah ayaa lagu kala gooyay tolashii oo la dhex maray askartii) oo ay saami riteen (maro aan cidhiidhi ahayn ayaa burburay haddii la kala gooyo si ay u tuuraan laadhuu u ah). Sabuurradii 22aad waxa la qoray ka hor inta aan iskutallaabta la been abuurin, laakiin waxa ay sharraxaysaa tafaasiilkeeda gaarka ah (daloolinta gacmaha iyo cagaha, lafaha oo aan kala go’in – iyadoo loo fidinayo sida dhibbanuhu u laadlaadsan yihiin). Intaa waxaa dheer, Injiilka Yooxanaa wuxuu sheegayaa in Dhiig iyo biyo ayaa ka soo baxay markii warankii dhinaca Ciise looga soo tuuray, oo tilmaamaysa dareere ku urura godka wadnaha. Isa al Masih ayaa sidaas u dhintay wadne xanuun. Tani waxay u dhigantaa Sabuurradii 22 ee tilmaanta ‘qalbigaygu wuxuu u rogmaday inuu dhuka u rogmado’. Erayga Cibraaniga ee ku sugan Sabuurrada 22-aad oo lagu tarjumay ‘la dooxay’ macno ahaan waxa uu la macno yahay ‘sida libaaxa’. Si kale haddii loo dhigo, gacmaha iyo lugaha ayaa la googooyay oo sidii libaax la gooyay markii la daloolay.
Gaaladu waxay ku jawaabaan in isu ekaanshaha Sabuurrada 22 iyo markhaatiga markhaatiga ee Injiil laga yaabo inay tahay sababtoo ah xertii Ciise waxay dhacdooyinka u sameeyeen si ay ‘ku habboon’ wax sii sheegidda. Taasi ma sharxi kartaa isku ekaanshaha?
Sabuurradii 22aad iyo dhaxalkii Isa al Masih
Laakiin Sabuurka 22 kuma dhammaanayo aayadda 18 ee shaxda sare – way sii socotaa. Ogow halkan sida ay u tahay guusha dhamaadka – dhimashada ka dib!
26 Oo waxaa wax cuni doona oo ka dhergi doona kuwa camalka qabow, Kuwa Rabbiga doondoonaa isagay ammaani doonaan, Qalbigiinnu weligiis ha noolaado.
27 Dunida darafyadeeda oo dhammu waxay soo xusuusan doonaan oo u soo jeesan doonaan Rabbiga. Oo qolooyinka quruumaha oo dhammu waxay ku sujuudi doonaan hortaada.
28 Waayo, boqortooyada waxaa leh Rabbiga, Oo isagu waa taliyihii quruumaha.
29 Dunida kuweeda buurbuuran oo dhammu wax bay cuni oo Ilaah bay caabudi doonaan, Oo inta ciidda gasha oo dhammuna hortiisay ku sujuudi doonaan, Xataa kii aan naftiisa sii noolayn karin.
30 Farcan baa isaga u adeegi doona, Oo Sayidka waxaa looga sheekayn doonaa qarniga iman doona.
31 Oo iyagu way iman doonaan oo waxay dadka dhalan doona u sheegi doonaan Xaqnimadiisa iyo inuu sameeyeyba.
Tani kama hadlayo faahfaahinta dhimashada qofkan. Taas waxaa lagu falanqeeyay bilowgii Sabuurka. Nebi Daawuud NNKH waxa uu hadda aad u eegayaa mustaqbalka oo uu ka hadlayaa saamaynta ay qofkan dhimashadiisu ku yeelan karto ‘fariis’ iyo ‘falalka mustaqbalka’ (aayadda.30). Taasi waa annaga oo nool 2000 oo sano ka dib Isa al Masih. Daawuud waxa uu inoo sheegay in ‘fariiskii’ ninkan ‘gacmaha iyo cagaha ka wareemay’, oo geeridii naxdinta lahayd u ​​dhintay ay ‘u adeegi doonaan’ oo ‘loo sheegi doono’. Aayadda 27 waxa ay sii sheegaysaa ilaa xadka ay gaadhi doonto meesha ugu shisheeya ee dhulka iyo ‘qoysyada quruumaha oo dhan’ oo ay ka dhigi doonto in ay ‘Rabbiga u soo noqdaan. Aayadda 29 waxay tusinaysaa sida ‘kuwa aan naftooda sii noolaan karin’ (dhammaanteen) ay maalin uun hortiisa u jilba joogsan doonaan. Ninkan xaqnimadiisa waxaa lagu wacdiyi doonaa dadka aan weli noolayn (‘wali dhalan’) waagii dhimashadiisa.
Dhammaadkani shaqo kuma laha haddii Injiil loo sameeyay mid ku habboon Sabuurrada 22 waayo hadda waxa ay la tacaalaysaa dhacdooyin badan oo dambe – kuwa wakhtigeenna ah. Qorayaasha Injiil, ee ku jira 1st Qarnigii, ma samayn karin saamaynta dhimashadii Isa al Masih waqtigeenna. Caqli-siinta gaalada ma sharraxayso dhaxalka mustaqbalka fog ee adduunka oo dhan ee Isa al Masih oo Sabuurka 22 uu si sax ah u saadaaliyay 3000 oo sano ka hor.
Quran – aqoontii Daa’uud ee hore ee uu siiyey Eebe
Ammaantan guusha leh ee dhammaadka Sabuurrada 22 waa dhab waxa suuradda Saba (Suuradda 34 – Sheba) iyo suuradda An-Naml (Suuradda 27 – Qudhaanjadu) ula jeedaan markay yiraahdeen Sabuurrada Daa’uud ee waxyiga ah:
Dhab ahaanbaan u siinay Nabi Daawuud fadli (dheeraad) xaganaga ah, waxaana nidhi buurahoow ka celceliya tasbiixda, shimbirahoowna (la celceliya tasbiixda,) waxaana u jilcinay birta.
Suuradda Saba 34:10
Waxaan siinay Daawuud iyo Sulaymaan Cilmi, waxayna Dheeheen Mahad Ilaahbaa iska leh ee ah kan Naga Fadilay wax badan oo Addoomdiisa Mu’miniinta ah.
Suuradda An-Naml 27:15
Sida ay tiraahdo, Eebbe wuxuu Daa’uud siiyey cilmi iyo nimco si uu u saadaaliyo mustaqbalka, aqoontaasna wuxuu ku gabyay ammaanta ku qoran Sabuurrada 22.
Haddaba ka fiirso su’aasha ku jirta suuradda al-Waaqicah (Suuradda 56-Lama huraanka ah).
Maxaydaan markay Naftu dhuunta gaadho.Idinkuna aad fiirinaysaan (Ruuxa dhiman).Annaguna aan idiinka dhawnahay, Laakiinse aydaan arkaynin.Haddaad tihiin kuwa aan la soo bixinaynin.Maad Nafta ku celisaan, haddaad Run sheegaysaan.
Suuradda al-Waaqicah 56:83-87
Bal yaa nafta dhimasho ka soo celin kara? Caqabaddan waxaa loo dhiibay si loo kala saaro shaqada ninka iyo kan Alle. Haddana suuradda al-Waaqicah waa sida saxda ah ee Sabuurka 22 uu qeexayo – oo waxay sidaas ku samaysaa inay sii sheegto ama sii sheegto shaqada Isa al Masih NNKH.
Mid ka mid ah ma uusan samayn karin saadaal ka wanaagsan oo ku saabsan saameynta iskutallaabta iskutallaabta ee Isa al Masih marka loo eego Sabuurka 22. Yaa kale ee taariikhda adduunka sheegan kara in faahfaahinta dhimashadiisa iyo sidoo kale dhaxalka
Nabiyada Sugu sarraysa Sida ay shaaca ka qaaday qorshaha Masih soo socda
The Calaamada Dhalashada Bikrada ‘Wiil wuxuu ka dhalan doonaa gabadh bikrad’ Nebi Ishacyaah wuxuu sii saadaaliyay 700 BC wuxuuna si qumman u noolaan doonaa dembila’aan. Keliya nolol kaamil ah ayaa loo bixin karaa naf kale. Isa al Masih, oo ku dhashay fulinta waxsii sheegista, ku noolaa noloshaas qumman
The soo socda ‘Branch’ wax sii sheegay magaca Ciise iyo ka saarida dembigeenna Nebi Ishacyaah, Yeremyaah iyo Sekaryaah ayaa si taxane ah u sheegay waxsii sheegyada mid iman doona oo Sekaryaah si sax ah ugu magacaabay Ciise – 500 sano ka hor intuusan noolaa Ciise. Sakariyas wuxuu sii sheegay in ‘maalin keliya’ dembiyada dadka laga saari doono. Isagu wuxuu naftiisa u bixiyey allabari ahaan, sidaas darteedna si sax ah ‘hal maalin’ dembiyada ayaa lagu cafiyey, iyagoo oofinaya dhammaan waxsii sheegyadaas.
Nebi Daanyeel iyo wakhtiga imaatinka Masih Daanyeel wuxuu sii sheegay jadwal sax ah oo 480 sano ah imaatinka Masih. Isagu wuxuu u yimid si waafaqsan jadwalka wax sii sheegidda.
Nebi Daanyeel wuxuu sii sheegay in Masih ‘la goyn doono’ Ka dib imaatinka Masih, nebi Daanyeel wuxuu qoray in isaga la gooyn doono oo uusan waxba haysan. Tani waxay ahayd wax sii sheegidda dhimashada soo socota ee Isa al Masih maadaama isaga ‘laga gooyay’ nolosha.
Nebi Ishacyaah ayaa saadaaliyay dhimashada & sarakicidda Adoonka soo socda Nebi Ishacyaah wuxuu si faahfaahsan u saadaaliyay sida Masih looga goyn doono dhulka kuwa nool oo ay ku jiraan jirdil, la diido, ‘loola dooxo’ dembiyadayada, loo kaxeeyo sida wan la gowracayo, naftiisana ay tahay qurbaan dembi. Laakiin dabadeed wuxuu arki doonaa mar kale ‘nolosha’ oo wuu guulaysan doonaa. Dhammaan saadaashan faahfaahsan waxay rumoobeen goorta Isa al Masih waa lagu qodbay iyo tdigaag ka soo kacday dhimashadii. In tafaasiisha noocaas ah la sii saadaaliyo 700 oo sano ka hor waxay calaamad weyn u tahay in tani ay ahayd qorshihii Eebbe.
Nabiga hoomboro iyo geeridii Isa al Masih Nebi Yuunus wuxuu la kulmay qabriga markii uu ku dhex jiray kalluunka weyn. Kani waxa uu ahaa sawir uu Isa al Masih ku macneeyey in si la mid ah uu isna geeri la kulmi doono.
Nebi Zakariye & maxaabiistii dilka oo la sii daayay Isa al Masih waxa uu tilmaamayaa wax sii sheegiddii Sakariyas oo ahaa in uu sii dayn doono ‘maxaabiista dhimashada’ (kuwa mar hore dhintay). Hawlgalkiisii ​​ahaa in uu dhimashada galo oo uu soo daayo kuwa halkaas ku xanniban ayaa nebiyadu sii sheegeen.
noloshiisa mustaqbalka fog la sii saadaalin doono 1000 sano ka hor inta uusan noolaan? Mar haddii uusan aadanuhu si faahfaahsan u saadaalin karin mustaqbalka fog tani waxay caddayn u tahay in allabarigii Isa al Masih uu ahaa “Qorsha Alle iyo ogaanshaha badheedhka ah“.
Nebiyada kale waxay sii sheegeen allabarigii Isa al Masih
Sida oo kale Taurat wuxuu ku bilaabay muuqaal muraayad ah dhacdooyinkii maalmihii ugu dambeeyay ee Isa al Masih ka dibna wuxuu sameeyay sawirka si cad oo faahfaahsan., nebiyadii raacay Daawuud waxay caddeeyeen tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan dhimashadii iyo sarakiciddii Isa al Masih. Shaxda hoose ayaa soo koobaysa qaar ka mid ah kuwa aan eegnay.
Iyada oo kuwan waxsii sheegyada ah oo badan, laga bilaabo nebiyo kuwaas oo laftoodu ay kala sooceen boqollaal sano, oo ku nool dalal kala duwan, oo leh asal kala duwan, haddana dhammaantood waxay diiradda saareen saadaalinta qayb ka mid ah guusha weyn ee Isa al Masih iyada oo loo marayo dhimashadiisa iyo sarakicidda -Tani waxay daliil u tahay in tani ay ahayd sidii qorshaha Eebbe ahaa. Sababtan awgeed, Butros, hoggaamiyaha xertii Isa al Masih, wuxuu ku yidhi dhegaystayaashiisa:
Falalka 3: 18
Isla ka dib markii Butros uu sidaas yidhi, wuxuu markaas ku dhawaaqay:
19 Haddaba toobadkeena oo soo noqda, si dembiyadiinna loo tirtiro, si ay wakhtiyo qabowjis lihii uga yimaadaan Rabbiga hortiisa,.
Waxaa jira ballan barako ah oo innagu jirta oo ah inaan dembiyadayada ‘na tirtiri karno’. Waxaan eegeynaa waxa ay tani ka dhigan tahay halkan.
Tags:isa al masih wax sii sheegayzabuur wax sii sheegid